I-Toilet | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Kanjani futhi kuphi ukwakha indlu yangasese ezweni
Ukuphumula okungcono kakhulu emoyeni wedolobha elingcolile, empeleni, ezweni. Kodwa-ke, ngaphandle kwezinsiza ezithile angeke ukwazi ukwenza emaphandleni. Isidingo sezindlu zangasese sikwenza ucabange ngokukhetha kohlobo nendawo yokwakhiwa okunjalo. I-Toilet ezweni, indlela yokukhetha indawo yokwakha Ngaphambi kokwakha indlu yangasese ye-dacha ngezandla zakho, kufanele uthathe isinqumo endaweni yayo.
Abantu abaningi babhekene nenkinga yokuhlanza ama-cesspools ezindaweni ezingaphansi komhlaba. Uma kungekho isistimu yokuthuthwa kwamanzi emaphakathi edolobhaneni, kufanele uhlomise owakho: ufake i-tank septic noma nje umbe imbobo. Kunoma yikuphi, uhlobo ngalunye lwe-cesspools ludinga ukuhlanza njalo. Sizoxoxa ngezindlela namasu okuhlanza ama-cesspools kulesi sihloko.
I-Peat closet eyomile yokunikeza, isimiso somsebenzi, izandla
Esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi kungani abanye abantu bengathandi ukuphumula kuleli zwe kungukuntuleka kwezinsiza. Ukuvakashela indlu yangasese ekhululekile kunomsebenzi ohamba phambili. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ukwakha indlu yangasese "efana nekhaya" akunakwenzeka - akunakwenzeka ukuxhuma kwisitshalo sokwelashwa ngenxa yokudelela noma izindleko eziphezulu zesistimu yokugwedla amandla okuzimela.